Wacdinta Ciise Masiix Jesus Cristo yahay Rabbiga, Soomaaliya
Evangelismo Jesus Cristo é o Senhor
Serão mostrados aqui nesse forum, evangelismo, o evangelho de Jesus Cristo, e todo o conteúdo da Bíblia Sagrada, em vários idiomas, para propagação do evangelho
Evangelismo Jesus Cristo é o Senhor :: Sua primeira categoria :: Seu primeiro fórum
por Lucas2017 em Seg Dez 26, 2016 11:08 pm
Ciise Masiix Jesus Cristo Or aad, iyo aad rabto in lagu badbaadiyo nafta FITAMIIN, shaki iyo in uu yahay reer Amor Greater, SEM, waxaana Aannu jecel Aad isaga, Aamiin
Markaasaa Ciise Jesus wuxuu Toomas ku yidhi, Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee.
YOOXANAA 14, 6
Isagaa u jawaabay oo ku yidhi, Waa inaad Rabbiga Ilaahaaga Deus, Elohim, Jeová ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan, iyo naftaada oo dhan, iyo xooggaaga oo dhan, iyo caqligaaga oo dhan, deriskaagana waa inaad u jeclaataa sida naftaada.
LUUKOS 10, 27
Ilaah Deus, Elohim, Jeová intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah.
YOOXANAA 3, 16
Laakiinse waxaa isaga loo dhaawacay xadgudubyadeenna, waxaana loo nabareeyey xumaatooyinkeenna, edbintii nabaadiinadeennana dushiisay ku dhacday, dildillaaciisiina waynu ku bogsannay.
ISHACYAAH 53, 5
Maxaa yeelay, haddaad afka ka qiratid in Ciise Jesus yahay Rabbiga, oo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah Deus Elohim, Jeová isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa,
ROOMA 10, 9
Oo haddana wuxuu iyagii ku yidhi, jidkayaga, baruurta oo Cuna, wax oo cabba macaan, oo wax oo aan kii u diyaarsanaynna Dira u qayb, waayo, maanta waxay Rabbigeenna u tahay Maalin quduus ah, Hana murugoonina, waayo, idinka waxaa ka tagtid idiin ah farxadda Rabbiga.
NEXEMYAAH 8, 10
Waayo, mushahaarada dembigu waa dhimashada, laakiinse hadiyadda Ilaah Deus, Elohim, Jeová waa nolosha weligeed ah ee laga helo Rabbigeenna Ciise Masiix Cristo Jesus.
ROOMA 6, 23
Ciise Jesus, furashada, Salvation
Oggolow Ciise Jesus, Isagu waa Salvation
Markaasaa Ilmo yaryar musqusha keenay inuu gacmiihiisa saaro .Oo u duceeyo, laakiin xertii Ayaa canaanatay. Markaasaa Ciise Jesus wuxuu ku yidhi, Ilmaha daaya oo ha u diidina inay ii yimaadaan, waayo, kuwan oo kale ayaa ka mid ah boqortooyada jannada.
MATAYOS 19, 13 ao 15
Ciise Masiix Jesus Cristo waa Sayidka sayidyada, King of Kings, iyo Aabbaha Daa'imka ah, iyo Amiirka Nabadda
II kaalaya kulligiin kuwiinna hawshaysan culaabaysanow oo, oo anigu waan ONA nasin doonaa.
MATAYOS 11, 28
Ciise Jesus ayaa ku yidhi, Anigu waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha. Kii i rumaystaa, in kastoo uu dhinto, wuu noolaan doonaa.
YOOXANAA 11, 25
Markaasaa Ciise Jesus wuxuu ku yidhi, Anigu waxaan ahay kibista nolosha. Kii ii yimaadaa ma gaajoon doono, kii i rumaystaana ma harraadi doono weligiis.
YOOXANAA 6, 35
Kanu waa qaynuunkayga inaad isjeclaataan sidaan idiin jeclaaday.
YOOXANAA 15, 12
Waxaa barakaysan kii ka fikira miskiinka,
Maalinta shar jiro Rabbigu waa samatabbixin doonaa isaga.
SABUURRADII 41, 1
Ilaah Deus, Elohim, Jeová waa magangalkeenna iyo xooggeenna,
Oo waa caawimaad inoo diyaar ah wakhtiga dhibaatada.
SABUURRADII 46, 1
Rabbigu wuxuu inoo sameeyey waxyaalo waaweyn,
Oo aynu ku faraxsan nahay.
SABUURRADII 126, 3
Kan dega Ilaaha ugu sarreeya meeshiisa qarsoon
Wuxuu joogi doonaa hooska Qaadirka.
SABUURRADII 91, 1
haddii dadkayga oo ah kuwa magacayga lagu yeedhay ay is-hoosaysiiyaan, oo i baryaan, oo wejigayga doondoonaan, oo jidadkoodii xumaa ka soo noqdaan, de markaasaan samada ka maqli doonaa, oo dembigoodana waan ka cafiyi doonaa, oo dalkoodana waan bogsiin doonaa.
Naftaydu waxay sugtaa Ilaah Deus, Elohim, Jeová oo keliya, Oo badbaadadayduna waxay ka timaadaa xaggiisa.
Kuwa Rabbiga isku halleeyaa
Waa sida Buur Siyoon oo aan la dhaqaajin karin, laakiinse weligeedba sii jirta.
SABUURRADII 125, 1
Waxaa barakaysan kuwa xagga ruuxa ka masaakiin ah, waayo, boqortooyada jannada iyagaa leh. Waxaa barakaysan kuwa baroorta, waayo, waa la qalbiqabowjin doonaa.
MATAYOS 5, 4
Waxaa barakaysan kuwa xaqnimada u gaajaysan oo u harraadsan, waayo, way dhergi doonaan. Waxaa barakaysan kuwa naxariista leh, waayo, waa loo naxariisan doonaa.
MATAYOS 5, 6
Kuwa ilmada wax ku abuurtaa, farxad bay ku goosan doonaan.
SABUURRADII 126, 5
Dagaalkii wanaagsanaa waan dagaallamay, oo tartankii waan dhammeeyey, iimaankiina waan
TIMOTEYOS 4, 7
Rabbigu waa adhijirka i jira; waxba u baahan maayo.
Laakiin midhaha Ruuxu Espírito Santo waa jacayl, farxad, nabad, dulqaadasho, roonaan, wanaag, aaminnimo,
GALATIYA 5, 22
Markaasuu wuxuu iyaga ku yidhi, Dunida oo dhan taga, oo uunka oo dhan injiilka ku wacdiya.
MARKOS 16, 15
Ciise Jesus wuxuu ku yidhi, miyaanan kugu odhan, Haddaad rumaysatid, waxaad arki lahayd ammaanta Ilaah Deus, Elohim, Jeová? Markaasay dhagaxii ka qaadeen. Ciisena indhihiisuu kor u taagay oo yidhi, Aabbow, waan kuugu mahadnaqayaa inaad i maqashay. Waana ogaa inaad mar kasta i maqasho, laakiin dadkan badan oo hareerahayga taagan aawadood ayaan taas u idhi inay rumaystaan inaad adigu i soo dirtay. Markuu sidaas ku hadlay dabadeed wuxuu ku dhawaaqay cod weyn, Laasarosow, soo bax. Markaasaa kii dhintay soo baxay, isagoo gacmaha iyo cagaha ay kafan kaga xidhan tahay, wejigana maro kaga xidhan tahay. Kolkaasuu Ciise Jesus wuxuu ku yidhi iyaga, Fura oo daaya, ha socdee.
Sidaa aawadeed qaar badan oo Yuhuuddii ah oo Maryan u yimid oo arkay wuxuu sameeyey ayaa rumaystay.
YOOXANAA 11, 40 ao 45
Ciise Jesus Wuxuu Bogsiiyey, xorayso, iyo baddalayaa, iyo Sidee MA roob Eliiyaah sameeyey, sidaa sameeyaan maanta qaar ka mid ah
Salaadda Waayo, waxaad
Rabbi Ciise Jesus, Ilaaha Deus, Elohim, Jeová Aabbaha ah, Sayidow Gacaliyayaalow, halkan waxaan waa in aad ka hor, si aad u weydiiso in aad noo dabooli dhiig aad u qaali ah, oo ku soo maydho isaga, oo noo quduus ka dhig, ina barakayn, qoysaskeena ku barakeeyo, qoyska waa kan this reading, barakeeyo guryaheena, Salva aniga iyo qoysaskeena, keeno caafimaad wanaagsan, jacayl badan, nabad badan, wax badan oo farxad, wax badan oo Harmony, wax badan oo farxad nool, wax badan oo farxad in nolosha, sababta badan in ay ku noolaadaan, noo daboola dhiigaaga, oo naga xumaantan oo dhan, caafimaad wanaagsan samatabbixin na siiso, dhiig badan, vitamin aad u badan, tamar badan, laakiin inta badan cunaa naftayada, innagu khasabtey in jidka nolosha, Saves kasta oo inaga mid ah na u keenaysaa in Jidka Salvation, nolosha weligeed ah, farxad weligeed ah, ammaanta weligeeda, Firdooska samada iyo iridda cidhiidhsan, iyo kiniisadda, noo buuxin Ruuxa Quduuska Espírito Santo ah iyo noo iyo qoysaskeena badbaadiyay, naga xoreeyaan xumaantan oo dhan, iyo jirrabaad walba, noo daboolayaa dhiigaaga magaca Ciise Masiix Jesus Cristo, oo ka bedelaysaa oo na siidaysay, in magaca Ciise Masiix Jesus Cristo Waayo, maamuus iyo ammaanu ha Ilaah Deus, Elohim, Jeová, Aamiin
Daawo filimka Ciise Masiix Jesus Cristo sida uu Injiilka Luukos
Eeg Kitaabka Quduuska ah ku qoran luqaddaada, oo la wada buuxsamay Ruuxa Quduuska Espírito Santo ah, oo aqbal Ciise Jesus, Isagu waa badbaadadayda, sharaf iyo ammaanta Ilaah Deus, Elohim, Jeová, Aamiin